Yugandha - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Uganda)
Waa Magaalada ugu balaaran Kampala
- Guud ahaan 236,040 km2 (81st)
- Biyo (%) 15.39
- 2012 qiyaasta 35,873,253 (35th)
- 2002 Tirakoob 24,227,297
- Mugga Dadka 137.1/km2 (80th)
- Guud ahaan $50.439 billion
- Qof qof $1,414
- Guud ahaan $21.002 billion
- Calaa qof $589
Qaybsiga (2009) 44.3 (medium)
Kobaca (2012) 0.456 (low / 161st)
w:SW:Uganda Yugaandha ama Jamhuuriyadda Yugaandha, Waa waddan Dhex kujir ah oo ku yaalla bariga Afrika. Yugaandha waxay daris la tahay wadamada Kiinya,Suudaan,Jamhuuriyada Dimuqaraadiga Kongo,Ruwanda,Tansaaniya iyo warta Fiktoriya. Magaca Yugaandha waxoo ka yimid boqorkii la dhihi jiray (Bugaandha) oo ka tali jiray waddanka koonfurtiisa u danbaysa.
2 waqtigii gumeesiga
4 Kofka deggan Uganda waddnamaha
5 waqtigii xornimada
6 Dagaalkii wadamada darika
8 Xuquuqda Aadanaha
9 Tafaasiil Kooban
Taariikh ahaan, dadka Ugaandhiiska waxa ay ahaayeen dad waranleey ah; koonfurta yugaandha waxaa deggenaan jiray dadka ku hadlo afka jareerta oo beeraleey ah; yugaandha waxaa ku badan ajaanibta. Waddanka waxaa ka soo tali jiray boqorkii la dhihi jiray (Bugandha).
Vista de la vila de Kampala.
waqtigii gumeesiga[wax ka badal | wax ka badal xogta]
intii ee gumeestiyaashii yurubiyaanka ee gumeesanin, wadanka waxaa joogi jiray carab oo ganacsato ah, sanadka marka oo ahaa 1830meeyadii. Wadanka markaas waxaa ka talin jiray 3 boqor, oo lakala dhaho, (Bugandha), (Kitara) iyo (karagwa). Carabta waxoo kanacsigooda ahaa, Adoonyaasha. Meelo badan neh diinta islamka ee ku faafiyeen. Sanadka marka oo ahaa 1860meeyadii wadanka waxaa soo galay gumeesti yaashii ingriiska. Gumeestihii ingriiska waxoo qabsaday Kenya iyo Ugandha, waxaana la isku dhihi jiray (ingriiska bariga afrika).waxaana la kala qeebiyay sanadka marka oo ahaa 1902.
Kofka deggan Uganda waddnamaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
waqtigii xornimada[wax ka badal | wax ka badal xogta]
sanadka marka oo ahaa 1950meeyadii, wadanka waxaa laga dhisay dimoqaraadi, waxaana la sameeyay Xisbiyaal iyo kongris. 1962 raiisul wasaaihii ugu horeeyay ee yugandha waxoo noqday Apollo Milton Obote, waa markii ee Ugandha xornimada heshay. 1972 waxaa dhacday doorasho kadhaxeeso Obote iyo Yoweri Museveni, doorashadaas neh waxaa ku guuleestay obote, isla markaas neh dood aa dhacday, Musveni waxoo ka dacwooday in ee doorashadaas xaqdarro ee eheed. Sanadka marka oo ahaa 1986dii waxaa madaxtinimada ku guuleestay Musveni oo ilaa hadda oo madaxweyne yahay.
Dagaalkii wadamada darika[wax ka badal | wax ka badal xogta]
1998ii waxaa dhacday in ee Ruwanda iyo Yugandha ee ku tashteen wadanka Kongo, si ee u ridaan madaxweynaha Kongo Laurent Kabila. Musveni iyo wafdi oo militari ah waxee ku tashteen in ee ciidanka UPDF u diraan kongo ayaga iyo ciidamada Ruwanda oo iskaashanaayo. Micneheeda neh waxoo ahaa in ee joojiyaan, xasuuqa loo geesanaayay dadka Banyamulenka ah oo ku nool wadanka kongo. Siyaasiinya Ugandha maku fikirin in ee xirtaan xuduudkooda, askarta Ugandheeska marka ee 1000km u galeen wadanka Kongo si ee u caawiyaan maleeshiyada (MLC) (Mouvement de Libération du Congo), waxaa ugandha soo galay ciidanka (ADF) (The Allied Democratic Forces) oo ka yimaaday wadanka Kongo, isla markaas neh waxee dab ku fureen magaalo yaal waaween sida magaalada Fort Portal waxeena qabsadeen, xabis ku yaalay galbeedka Ugandha. Ciidamada Ugandha iyo Ruwanda waxee bilaabeen in ee gurtaan oo dhameeyaan wax yaabaha ee dadka kongo ee ku noolyihiin iyo beerahooda. maraykanka marka oo arintaas maqlay, waxoo Ugandha ka gooyay,ceerti oo militariga Ugandha sii jiray. Madaxweynaha maraykanka Bill Clinton aa ka xumaaday, dhaqaaqa ee ciidanka Ugandha sameeyeen, asiga oo la rabay in oo kadhigo ciidanka ugu xoogan oo dhibaatooyinka afrika xalin karaan.Madaxda Ugandha waxaa mar looga dooday in ee ayaga ka danbeeyay dagaalkii ituri, Xasuuq badan neh ee u geesteen dad badan oo ku noolaa deegaanada u dhow meesha biyo degaanka ah. Sanadka marka oo ahaa 2005tii, waxaa maxkamada Caalamiga go aansatay in ee Ugandha lacag siiso Jamhuuriyadda Kongo, kadib markii ee dadka kongo ee arkagaxis ku rideen. 2007 ciidamada Ugaandheeska waxaa la soo galiyay wadanka Soomaaliya, si ee u caawiyaan DFKMG, ayaga oo wato magaca midowga afrikaanka ee Amisom. Ciidamada Ugaandheeska waxee xasuuq ku haayaan dadka Soomaalida oo rayidka ah, ayaga oo madaafiic ku rido meelaha ee dadka rayidka ku badanyihiin ama dabaqyo inta ee koraan ee dadka madaxa ka toogtaan ayaga oo ku marmarsiyoonayaan, maleeshiyada ka soo horjeedo. ciidamada amisom waxee gaarayaan in ka badan 7000, waxeena muqdisho ka joogaan meel aad u yar, dhinaca madaxtooyada.
Madaxweyaha wadanka waa Yoweri Museveni oo madaxweyne ahaa ilaa sanadka maka oo ahaa 1986dii. madaxweynaha wadanka waa hoogaamiyaha madaxda Yugandha, madaxweynaha waxoo doortaa Raisul wasaare oo ku caawiyo shaqada oo qabanaayo. Barlamaankooda waxoo ka koobanyahay 300 oo Xildhibaan, 81 ayaga ka mid ah neh, waxee ka imaadeen meelaha ugu faqiirsan wadanka. Halkii xildhibaan waxaa la doortaa 5tii sano mar.
Xuquuqda Aadanaha[wax ka badal | wax ka badal xogta]
sanado badan ayaa waqooyiga yugandha ka socon jiray dagaalo oo xasuuq dadka u geesanaayeen, maleeshiyada Lord's Resistance iyo ciidamada Yugandha. Dadka neh ilaa hadda waxaa ku jirto baqdin. wadanka waxaa ka jiro xornimo ee dadka heesanin, oo dadka qaar la xiraayo ama la afduubanaayo, isla markaas neh si xun loola dhaqmaayo, mararka qaar neh caalamka oo gaaraa. 2005tii, wadanka ingriiska waxoo Yugandha ka gooyay, Ceertii oo sii jiray. Mardhow ee eheed markii oo ururka (grassroot) oo isku dayay in ee caalamka ogeysiiyaan caruurta ee maleeshiyada Lord afduubtaan, isla markaas neh ee ku qasbaan in ee askar noqdaan.Badanaa ciyaalka la afduubto kama badno 8jir, Ciyaalka wiilasha ah waxaa lagu qasbaa in ee qof dilaan, ciyaalka gabdhaha ah neh, waxaa lagu qasbaa in ee guursadaan maleeshiyada ciidankooda. 2005tii waxaa Maxkamada Caalamiga ku dhawaaqday in la xiro madaxda maleeshiyada Lord, oo lagu eedeeyay in ka danbeeyaan, dilka bini aadanka ka baxsan, xasuuqa, xooga iyo ciyaalka askarta laga dhigaayo.
Tafaasiil Kooban[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Dalka jamhuuriyada Uganda. Dalka Uganda waxa uu ku yalaa dhinca bari ee qaarada Afrika waxana kamid ah dalalka uu xadka la wadaago dalalka Tanzania, Rwanda, South Sudan iyo dalka jamhuuriyada Dimuqraadiga ah ee Congo. Waxa sidoo kale dhinaca galbeed kaga taala dalka harada qaarada Afrika ugu caansan uguna wayn ee Victoria. Harada Victoria waxa ay kala soorta dalalka Kenya Tanzania iyo jamhuuriyada Uganda. Caasimada dalka waxa la yidhaa Kampala. Bedka: Bedka dalku ku fadhiyana waxa lagu qiyaasaa 91,135.55, oo mayl laba jibaaran) una dhiganta 236,040.00, oo (kiiloo mitir laba jibaaran) sidoo kale baaxada dalka Uganda waxa lagu qiyaasaa in uu ku dhowyahay gobolka (Oregon) ee dalka Maraykanka.
Dadka ku dhaqan dalka Uganda tirakoobkii la qaaday sanadkii 2010-kii waxa tirada dadka reer Uganda ay kor u dhaysay 33-milyan oo ruux. Sidoo kale saadasha dadka reer Uganda ee sanadka 2050-ka waxa lasheegay in ay gaadhi doonto 84-milyan oo ruux.
Luuqadaha lagaga hadlo dalka waxa kamid ah luugada Ingiriisiga ah luuqada 1aad ee ay ku hadlaan dadka reer Uganda, taas oo badanaa loo adeegsado waxbarashada iyo warbaahinta sida jaraa’idada. Luuqadaha kale ee ay ku hadlaan muwaadiniinta reer Uganda waxa kamid ah Luuqadaha Niger-Congo, Nilo-Saharan, Swahiliga iyo Carabiga.
Dadka aqoonta leh ee dalka Uganda waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 61.8% kamid ah cabirka guud ee dadka reer Uganda.
Diimaha ay kala aaminsanyihiin dadka ku dhaqan dalka Uganda waxa kamid ah diinta kiristanka gaar ahaan mad-habta Roman Catholig oo ay haystaan boqolkiiba 33%, halka Protestanka ay ka haytaan dad gaadhaya boqolkiiba 33%, diinta Islaamka oo ah diinta sadexaad ee dadka ugu badani ay haystaan ayaa tirada dadka Muslimka ah waxa lagu qadaraa boqolkiiba 16%, diimaha dhaqanka la xidhiidha ee ay haystaan dadka Ugandhiiskii waxa lagu qiyaasaa tirada dadka haysta boqolkiiba 18%.
Da’da ragga reer Uganda waxa lagu qiyaa in ay gaadho da’doodu 43-sano, dumarkuna wax ay jiraan 44-sano.
Qaabka ay u shaqayso Dawladda dalka Uganda waa nidaamka caanka ah ee jamhuuriga (Government Type republic).
Lacagta laga qaato dalka waxa la yidhaa Ugandan shilling oo loo soo gaabiyo (USh). Warshadaha: Warshadaha dalka ka jira waxa ay farsameeyaan Sonkorta, Tubaakada, Cudbiga, Dunta, Sibidhka, iyo alaab kale oo faro badan.
Beeraha dlaka jamhuuriyada Uganda waxa ka baxa ama laga beera dalagyo ay kamid yihiin Coffeega, Cudbiga, Shaaha, Cassavanaha, Baradhada iyo Galayda.
Dadka reer Uganda waxa ay dhaqdaan xoolo ay kamid yihiin Riyaha iyo Lo’da, oo badanaa loo isticmaalo ama loo dhaqdo hilib ahaan. Waxa kale oo jira qaybo dadka reer Uganda kamid ah oo dhaqda Khinsiirka iyo Digaaga. Dhulka la isticmaalo ee dalka Uganda waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 25% kamid ah cabirka guud ee dalka. Dalka Uganda oo kamid ah wadama uu maro dhulbadhuhu ayaa ku caan ah dhul qurxoon oo soo jiita indhaha dadka dalxiisayaasha ah maadaama oo dalka harahu ku badanyihiin.
Kharyaadka dabiiciga ah ee dalka Uganda waxa kamida ah macdanaha Koborta, Cusbada, Cobalt, iyo awooda biyaha lagaga dhaliyo korontada ee (hydropower).
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Ugaandha.
↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 . International Monetary Fund http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=31&pr.y=16&sy=2009&ey=2012&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=746&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=. Soo qaatay 18 April 2013. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ "Nuqul Archive". HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. pp. 144–147. Waxaa laga kaydiyay the original 26 Bisha Laba iyo Tobnaad 2018. Soo qaatay 28 November 2013. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin); Hubi qiimaynta taariikhda: |archive-date= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Yugandha&oldid=226432"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Diseembar 2021, marka ee eheed 23:59.